हेलिकोप्टरको होहल्लामा दब्यो विस्थापितको वेदना , छियाँ , छियाँ गाउँ , पालमा निन्द्रा लाग्दैन गाउँलेको ? – Nepalpostkhabar
nanda । २९ असार २०७७, सोमबार ०५:४२ मा प्रकाशित
हेलिकोप्टरमा गएका नेताहरू हेलिकोप्टरमै फर्किए, पाखामा पाल टाँगेर बसेका विस्थापितले न लत्ताकपडा पाएका छन्, न खाद्यान्न । सिन्धुपाल्चोकको जम्बुदेखि जाजरकोटको बारेकोटसम्मका बाढीपहिरोपीडितको एउटै व्यथा , विस्थापित बस्ती , जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–४ का दुई गाउँ पहिरोले छियाछिया भएपछि विद्यालयको शरणमा छन् ।विस्थापित जीवन , जाजरकोटको पहिरोमा शुक्रबार बेपत्ता भएकामध्ये शनिबार भेटिएका १० जनाको सामूहिक दाहसंस्कार गरिएको छ ।
जाजरकोट , बारेकोट गाउँपालिका ४ , सार्कीगाउँका दुई घर पहिरोले पुरिदा तीन जना मात्र बाँच्न सफल भएका छन् । गोठमा पशुचौपाय हेर्न गएका छोरा , छिमेकी सहयोग गर्न गएका घरमुली र माउलीमा गएका कारण उनीहरुको ज्यान बचेको छ ।
शुक्रबार विहान ४ बजे गएको पहिराले दुई घरका १२ जना मध्य हाल सम्मा ११ जनाको मात्र सव फेला परेको छ । विरामी छिमेकीलाई भेटना भएका कलु सार्कीका श्रीमान् तुले सार्की र उहाँका १४ बर्षीय छोरा रमेश सार्की छोरा कुम्द स्थित गोठमा गएका कारण बाँच्न सफल भएका हुन् ।
६ जनाको परिवार रहेको तुलेले श्रीमती कलु सार्की , छोरी तिर्खा , कमला कान्छो छोरा सुभासलाई गुमाउनु परेको छ । अर्का मृतक घरमुली गोपाल सार्कीका १३ वर्षीय छोरा पवन सार्की मामाघर सुवाकोट गएका कारण ज्यान जोगिएको छ । पवनले बाबा गोपाल सार्की, आमा पुष्पा सार्की , वैनी लक्ष्मी र भाई अजुर्न सार्की सधाका लागि गुमाएका छन् । त्यस्तै कलुका घरमा पाहुँना आएकाहरुले कुशे गाउँपालिका ९ चौताराका तीन भाई, वैनीले समेत सार्कीगाउँकै पहिरामा परि ज्यान गुमाएका छन् । आफन्त गुमाएकाहरु विद्यालयमा सरण लिएर बसेका छन् । विद्यालयमै किरियाकाज सुरु भएको छ । आफन्तको यादमा शुक्रबार देखि आफन्तका आँसु थपिएका छैनन् ।
बाँचेकाहरु सवै स्थानीय विद्यालयमा बस्दै आएका छन् । सार्कीगाउँका सार्कीहरुमा मात्र ३२ घर विस्थापित भएका छन् । बोहोराटोलमा १९ घर विस्थापित भएका छन् । अन्य सवै वडा ५ , १ लगायतका ठाउँमा गरी ५ सय भन्दा बढी घरधुरी विस्थापित भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिंहले जानकारी दिए ।
विस्थापित सार्कीहरुले जग्गा र अस्थायी घर निर्माण गर्न राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । अहिले अस्थायी रुपमा ज्यान जोगाउन विद्यालयमा बुसेका सर्वसाधारणहरु विकल्प दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । विस्थापित लोकेन्द्र बोहोरा भन्छन् , “ चिराचिरा परेको जमिन भत्किएको घर टाढैबाट हेरेर चित बुझाउछौँ । केही मकै छ हामीसँग तर पिस्नका लागि घट्ट सवै खोलाले बगाउदा समस्य भएको छ । स्थानीय वजारमा चामल छैन कसरी बाँच्ने ? ” खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नायकबाडा बारेकोटमा एक गेडा चामल छैन । जनता आवास कार्यक्रम लागु गर्न सर्वसाधारणको माग छ ।
१२ जना मध्य १० जनाको सव जलाएर विद्यालयमा नै किरिया काजको काम सुरु भएको छ । आज भेटिएका कमला सार्कीको दाहसंस्कार भएपनि लक्ष्मी सार्कीको दाहसंस्कार हुँन बाँकी रहेको छ । पहिरो तथा खोलाहरु बढ्दा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीय शिक्षक तीर्थराज बोहोराले जानकारी दिए । त्यस्तै बारेकोट गाउँपालिका ६ धुमामा वेपता दुई जनाको सव अझै फेला पर्न सकेको छैन । त्यस्तै जुनिचाँदे ११ का डिल्ली चदारा समेत अझै फेला पर्न सकेका छैनन् । नेपाली सेना , प्रहरी , सशस्त्र प्रहरी र सर्वसाधारणहरुले हराएकाहरुको खोजी कार्य जारी रहेको छ ।
हिजो राहत लिएर काठमाडौँबाट सार्कीगाउँ जाने भनिएको वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत लगाएतको टिम आज मात्र हेलिकोप्टरबाट गाउँ पुगेको छ । खराव मौसमका बीचमा गाउँ पुगेको मन्त्री बस्नेत सवार हेलिकोप्टर प्रभावित गाउँमा अवतरण हुँन नसक्दा ठकुरी जिरी गएर अवतरण गरि राहत सामग्री उपलव्ध गराएको छ । मन्त्रीलाई भेट्ने आशामा बसेका सर्वसाधारणहरु खराव मौसमका कारण मन्त्री उडेपछि भेट्न पाएनन् । दुई ठाउँमा हेलिकोप्टर अवतरण गरेपनि हेलि नै माटोमा गाडीएपछि छिटो , छिटो गरि हेलिकोप्टर उडाएको थियो ।
गाउँपालिकाद्धारा किरिया खर्च
बारेकोट गाउँपालिकाद्धारा मृतकका आफन्तलाई किरिया खर्च उपलव्ध गराएको छ । एकै घरका धेरै मृत्यु भएपछि आफन्तलाई पीडा खेप्न समस्य भएको छ । विस्थापितहरुले तुरुन्तै राहत र पुर्णस्थापना गर्न स्थानीयवासीहरुको माग रहेको छ । एकै ठाउँमा दर्जनौ मानिसहरु बसीरहेकोले व्यवस्थापनमा समस्य भएको छ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले हेलिकोप्टरमा लिएको राहत सामग्री ।